इतिहास / अभिलेख Archives - Page2of2- मूल्याङ्कन अनलाइन
फागुन ७, काठमाडौँ प्रजातन्त्र र फागुन नेपाली इतिहासमा नबिर्सिइने शब्द हो । ७ फागुन २००७ मा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो । फागुन ७ गते भएको परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा २०४६ र २०६२/०६३ का परिवर्तन भए । राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ सालले परिवर्तनको ढोका खुल्यो । विश्लेषक हरि शर्मा २००७ सालमा भएको प्रजातन्त्र स्थापनाले परिवर्तनका लागि मार्ग खोलेको बताउँछन् । १०४ वर्षीय राणाशासनले राजालाई समेत नारायणहिटी दरबारमा अघोषित बन्दी बनाएपछि प्रजातन्त्र चाहनेले राजा त्रिभुवनलाई दरबारबाट विराटनगर वा पाल्पा लैजान खोजेका थिए । राजा त्रिभुवन दरबारबाट निस्केर भारतीय राजदूतावासमा शरण लिई हवाईजहाजबाट भारत गए । यसपछि नेपालको राजनीतिले अचानकपूरा पढ्नुहोस्
सन्दर्भ : प्रलेस र जगदम्बाको साहित्य–इतिहास लेखन परियोजना
इतिहास अलिकति स्कुल–कलेजमा पढ्ने–पढाउने विषय जस्तो थियो, अलिकति राजामहाराजासँग जोडिएका दिवस–जयन्ती जस्तो थियो । तर पछिल्ला दिनमा यो पाठशालाका पर्खालहरू नाघेर चोक–चौतारामा तीखो बहस झेल्न आइपुगेको छ । इतिहासका ठूलापूरा पढ्नुहोस्
माघ ११, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘नयाँ शक्ति अभियान’को ३५ सदस्यीय केन्द्रीय परिषद् घोषणा भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको लगत्तै डा. भट्टराईले एकीकृत नेकपा माओवादीपूरा पढ्नुहोस्
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ! १) नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् गठन भएको पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईहरुलाई संबोधन पाउंदा म गौरवान्वीत भएको छु । वर्तमान सरकार गठनमा प्राप्त तपाईंहरूकोपूरा पढ्नुहोस्
विनाश बेहोरेको शहरको चित्र–कथा
साढे चार वर्षपछिको फुकुसिमा
असोज २५, काठमाडौं । सन् २०११ को भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीबाट क्षतविक्षत फुकुसिमा दाइइची पावर प्लान्टनजिकको क्षेत्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा लाग्छ, त्यहाँ समय रोकिएको छ । विपत्तिको समयमा शहरलाई जस्तोपूरा पढ्नुहोस्
सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रताको लागि एकताबद्ध भएर लड्यो भने कुनै पनि देश जति सानो र कमजोर भए पनि बिजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्व इतिहासको एउटा नमूना देश हो – भियतनामपूरा पढ्नुहोस्
तीन दलको सहमतिमा भदौ ४ मा संविधानसभामा प्रस्तुत
मस्यौदा संविधानको मुख्य अंश
प्रस्तावना हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामीपूरा पढ्नुहोस्
नेपाल भाषा विश्वकै सबभन्दा पुराना भाषाहरुमध्ये एक हो । तर नेपाल भाषाको इतिहास हेर्ने हो भने शुरुदेखि अहिलेसम्म यो भाषा एक किसिमले उत्पीडित र उपेक्षित नै रहेको छ । योपूरा पढ्नुहोस्
ऐतिहासिक १२-वुँदे समझदारी-पत्र नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र ९म्झयअचबअथ० वीचको संघर्ष आज अत्यन्त गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्धन्दकोपूरा पढ्नुहोस्
विगत चालीस वर्षमा दुई विश्व युद्धहरू भए । पहिलोको फलस्वरूप विश्वको ६ खण्डको एक खण्ड भू-भग पूँजीवादी घेराबाट मुक्त भएको छ र समाजवादी सोवियत सङ्घको जन्म भएको छ र सबलपूरा पढ्नुहोस्
प्रस्तावना नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्पुत् लोकतन्त्र शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै सात राजनैतिक दल रपूरा पढ्नुहोस्